Moments Neshamwari 19
Chii chinonzi chimiro chaMwari kana chimiro cheMunhu Mukuru?
Izwi rekuti incarnation rinoreva icho chakapinda mumuviri wenyama. Kuverengera humwari zvinoreva humwari mune fomu yemunhu. Kuverengera humwari zvinoreva humwe hwekuonekwa kweUMwari muchimiro chemunhu, kufara pamwe, kana kuverengera kwaMwari sezvavanodaidzwa, zvakataurwa munhoroondo huru dzechitendero. Kuonekwa kwechimiro chekudenga kwehumwari kunopindwa nekutanga kwechinamato chitsva, icho chinotora zita racho kubva kune icho chekuonekwa kana rine zita rayo rakapihwa naro nevateveri vanotevera. Philosophically, Mwari, Universal Mind, kana Mwari, ihwo huwandu hweVatambi vehunyanzvi vakadarika kukosha kwekuzvarwa patsva uye kupfuura kutadza kwevanhu uye nekushaya simba. Uku kuungana kwakawanda kwevakangwara avo vari Divine dzimwe nguva kunotaurwa nezvemaLogos. Panguva dzinotenderwa nemutemo, mumwe weuyo Anotambira Mwari, kana kuti Universal Mind, kana Mwari, anoonekwa pasi pano kubatsira vanhu mukufambira mberi kwavo uye kukura kune kusafa uye neUMwari. Kana chiitiko chakadai chikaitika zvinonzi ndiko kudzikwa kwemuponesi munhu avatar, weLogos, Demiurgos, Universal Mind, Mwari, iwo mweya mukuru kana Mwari, maererano neshoko revanhu vanorekodha chiitiko. . Pane fungidziro inofungidzirwa yakasungirirwa pachiitiko chakadai, uye kune akawanda madhijitari nemhando dzedzidziso dzeVamwari. Asi kunyatsopindura mubvunzo maererano nehunyanzvi hwekuzvarwa kweMunhu Wekumusoro-soro ndekwekuti mumwe weVatambi veUmwari anotora nzvimbo yekugara nemunhuwo zvake munhu akafa zvakakwana uye akafambira mberi, mumuviri, mune huchenjeri uye pamweya, kuti aratidze hukama hweVamwari.
Chii chinoshandiswa kana basa remuviri wepituitary?
Rwepanyama, kunzwisisika kwepamberi maererano nemuviri wekuti iri chigaro chinotonga kana muzinda weasipi system. Iyo inoumbwa nemakanda maviri embes, iyo yekumusoro lobe ichive icho chinogamuchira zvese zvinoonekwa zvemuviri kubva munzeve dzenzwi, uye yekumusoro lobe ichive iyo iyo iyo mota nerves yakadzorwa uye yakanangiswa. Isu taizoti muviri wepituitary imoyo wetsinga senge moyo wetsandanyama ndiwo musimboti wechitenderera. Sezvo ropa rinoyerera kubva pamoyo kuenda mumuviri kuburikidza nemitsetse uye richidzoka nenzira yemidziyo kuenda kumoyo, saka pane mutsvundu wetsinga kana ether iyo inotenderera nemuviri kubva pituitary muviri nenzira yemota nerves. kumashure kuburikidza neyekunzwa mitsipa kune iyo pituitary muviri. Iyo pituitary muviri ndiyo nzvimbo iri muuropi iyo iyo Ego yemunhu inobata muviri wemuviri, uye neiyo nzvimbo iyo Ego yemunhu inopfuura nepakati dzinozivikanwa sekumuka, kurota, uye kurara kwakadzika. Kana iye munhu Ego achibata zvakananga pairi kana neye pituitary muviri wemurume anonzi akasvinura uye kuziva muviri wake uye nepasi rakamukomberedza. Kana iyo Ego ichizorora kubva pakubata nekukasira kana kudzora kweiyo pituitary body, zvinoita kuti muviri uve nekuzorora uye kudzoserwa nehupenyu hupenyu hwenyika inoyerera mukati nekubuda mumuviri, painenge isina kukanganiswa nekusawirirana kwakaunzwa. nezvakaitwa nepfungwa kana kana pituitary muviri. Sezvo pfungwa kana Ego inosunungura yakabata pituitary muviri uye ichizorora pamwe mamwe nzvimbo dzeuropi kurota, uye hwakakomba nyika dzekurara nemamiriro avo epakati anounzwa.
Chii chinoshandiswa kana basa regeni repaini?
Ose ari maviri pituitary muviri uye pineal gland imitezo inzvimbo dzekusangana kwemweya wemunhu. Asi nepo pituitary body iri iro centre iro rinoshandiswa zvakananga nehunhu hwevanhu muzvinhu zvese zvinoda kushanda kwepfungwa, chinonzi pineal gland ndicho nhengo chinoshamwaridzana nehunyanzvi hweumwari hwemunhu. Iyo pituitary muviri inoshandiswa mune zvese zviyero zvekugadzirisa uye kwepfungwa mashandiro anoda basa reiyo yekukurukurirana masimba. Iyo pineal gland inoshandiswa kana ruzivo rakananga rwechinhu ruchawanikwa. Iyo pineal gland inhengo iyo kuburikidza iyo inounzwa kunzwisisiro yemunhu iyo zivo uye huchenjeri huri hwakakwana mukati mazvo, hunozviratidza, pasina maitiro ekufunga. Iyo pineal gland chihengo chinoshandiswa nehunyanzvi uye nehungwaru nemunhu ane nzwisiso yemweya nehungwaru. Izvi zvinoshanda kune vakachenjera pamweya. Kune vanhuwo zvavo muviri wechikamu unoshandiswa pasina zivo yake yepedyo nenzira imwe chete yaanogona kufunga asi asingazive mafungiro ake. Mune munhuwo zvake pineal gland ichipo chiripo kune zvinogoneka zveMunguva yemberi hweVanhu. Asi parizvino chinyararire seguva.
Chii chinoshandiswa kana basa repleen?
Iyo denderedzwa ndeimwe yematunhu eiyo astral kana fomu yemuviri. Iyo danda inoshanda kunyanya muhupenyu hwepakutanga kugarisana nehukama pakati pesero, astral fomu yemuviri kune cellular chimiro chechinhu chemuviri, kuburikidza nehurongwa hwekutenderera. Izvo zvine chekuita nekutenderera kweropa uye neye lymphatic system. Mushure mekunge muviri waiswa mune zvawo maitiro uye chimiro chemuviri chave kunyatso kusimbiswa, tsvina inogona kugovaniswa nayo nekuti iyo muviri weAfral muviri unobva wagarwa mune yese chikamu chemuviri.
Chii chinoshandiswa kana kushanda kwetachiona gland?
Iyo tezi yegungwa ndeimwe yenzvimbo dziri mumuviri pane iyo chinoshandiswa kutora chitunha chisati chazvarwa. Izvo zvakanangana neiyo yepituitary muviri uye inochengeterwa kana yekuchengetedza bhatiri kubva kune iyo yakasunungurwa mamwe makemikari zvidhori anodiwa kune bony chimiro chemuviri, uye zvakare inobata tincture inoshanda paropa. Iyo tezi yegungwa inhengo iyo iyo pfungwa dzinoshanda mumuviri. Iyo tezi yegland, pituitary muviri uye pineal gland zvese zvine chekuita nekuumbwa kwechikamu chemuviri uye nepfungwa. Kana aya gonzo akanganisa anokanganisa neyakajairika kuita kwepfungwa uye mune dzakawanda zviitiko zvichakonzera rufu kana zvakadaro kukanganisa pfungwa sekuunza idiocy kwechinguva kana kufambiswa kwepfungwa.